KUSAITA KUTI URI KUTI Gadziriso yeGore Idzva Ive Kushanda | Martech Zone
Chipiri, Zvita 29, 2009 Svondo, October 4, 2015 Robby Kuurayiwa
Gore idzva kwasara mazuva maviri kuti usvike. Gore rega rega, ingangoita hafu yevaAmerican vese vanoita Zvisarudzo zveGore Idzva, asi mazhinji haachengete. Isu tinoshandisa kutanga kweyekarenda nyowani kuyedza kukurudzira shanduko inoshamisa, asi hazvishande nguva dzese. Ndicho chikonzero kutaura pamusoro KUSA KUTI KUTI Uite Zvitsva zveGore Idzva ndicho chiitiko chekutanga chegore rakareba 2010 Chigadzirwa Nhepfenyuro inogarwa neSlaughter Development. (Ramba uchiverenga zvekushomeka chaiko!) Pane imwe nzira iri nani yekumisikidza nekusangana nezvinangwa, kunyanya zvine chekuita nemashandisiro aunoita tekinoroji yekusimudzira kusimudzira bhizinesi rako uye neako marashi.
Iwo Matatu Mhando dzezvinangwa
Chikonzero chakakosha nei tichitadza kuchengeta maSarudzo edu egore Idzva ndechekuti iwo akaumbwa nemhando isiriyo yechinangwa. Funga zvinotevera zvinotevera zvikamu zvezvinangwa.
Zvinangwa zvisina kujeka - Kana danho regore rako idzva riri rekuti "Upinde muchimiro" kana "Kudza bhizinesi rako", pamwe hausi kuzobudirira. Izvo zvinogona kunzwika zvakanaka pabepa asi iwe uchaziva sei kana urikufambira mberi? Uchaziva sei iwe kana iwe wawana icho chinangwa?
Mhedzisiro Zvinangwa - Kazhinji zvisarudzo zvegore redu idzva zvinovakirwa pa migumisiro. Semuenzaniso, unogona kugadzirisa "kurasikirwa nemapaundi makumi maviri" kana "kuwedzera kutengesa ne25%." Izvi zviri nani pane zvinangwa zvisina kujeka nekuti zvinogona kuyerwa, asi kazhinji zvinokanganiswa nemamiriro ezvinhu atisingakwanise kudzora. Kumisikidzwa kwezvinangwa kunofanirwa kuve kwakanyanya nezve basa kupfuura mhedzisiro.
Maitiro Ezvinangwa - Idzi ndidzo mhando dzakanakisa dzezvinangwa nekuti zvinoratidza izvo iwe kuda kuita. Ivo vanovimba zvakanyanya nesimba kupfuura ivo vari pamukana wakasarudzika. Funga nezve resolution "yekushanda kunze kana pavhiki" kana "kuzadzisa tarisiro nhatu itsva zuva rega rega." Idzi hope dzinogona kuitwa chaidzo kuburikidza nekushanda nesimba. Iwe haudi metabolism yako kana musika kuti ubatane.
Zvinangwa nekushambadzira neTekinoroji
Hedzino dzimwe nzira dzinotyisa dzekumisikidza zvinangwa zvekushambadzira kwako uye kushandisa tekinoroji gore rinouya. Musaiti ita izvi zvisarudzo zvako:
Wedzera tsamba tsamba yakavhurika mwero ne10%
Kaviri vateveri vangu veRSS
Gadzira yakamanikidza kushambadzira mushandirapamwe wezvigadzirwa zvemureza
Gadzirira kushandisa kwangu WordPress plugins
Izvi zvinangwa kana zvakajeka kana futi mhedzisiro. Pane kudaro, edza kuzvishandura mushanduro idzi, dzino tarisa pane maitiro auchazoshandisa mune ramangwana:
Ita bvunzo yeA / B kuyedza tsamba nyowani nyowani
Natsiridza metriki pakuongorora vaverengi veRSS
edza mapoka evanhu shambadziro nyowani
Kuchengetera nguva yekutarisa zvine hungwaru angu azvino WordPress plugins
Unofarira kudzidza zvakawanda nezveZvisarudzo zveGore Idzva neTekinoroji? Nyoresa kuti "SEI KUTI UGADZE ZVESANGANETSO ZVEGORE ITSVA Pabasa" neChitatu, Ndira 6 @ 2:00 PM pano muIndipolis. Ivo vanhu vana vekutanga kunyoresa pamhepo nekodhi yekubvisa MKTGTECH ichagamuchira kushamisika kushomeka! Nyoresa nhasi!